Masinina Mini Machine Scost Aroma diffuser China Manufacturer
Description:Masinina Mini Scent diffuser,Aroma diffuser Electric Scent Machine,Aroma diffuser Machine Electric
Home > Products > Scent diffuser > Masinina Mini Machine Scost Aroma diffuser
Masinina Mini Machine Scost Aroma diffuser
Tsy fombafomba fialan-tsasatra sy fomba mahafinaritra fotsiny ny hanitra ny tranonao, ny fampiasana ny menaka manitra tena ilaina dia afaka manome tombony aromaterapeutic ho an'ny vatana sy ny saina.
Na mila menaka manokana ianao na mitambatra, na hametraka fanina milamina, dia azonao atao ny mampifanaraka ny fampiasana ny menaka ilaina amin'ny fikajiana ny toe-javatra ary mametraka ny sehatra ho an'ny fonao.
Miaraka amin'ny fahaiza-miaina lehibe, ny diffuser ultrasonic dia miparitaka hatramin'ny 8 ora. Ny jiro LED angovo mamorona jiro malefaka sy mampitony, safidy loko marevaka ary fametrahana 1, 3 na 6 ora, dia miovaova ny varimbazaha vita amin'ny hazo mandritra ny fisaintsainana, fitsaboana aromaterapy na miala tory. Miala ho azy ny fiparitahan'ny tranobe rehefa latsaka ao ambanin'ny ambaratonga iray ny rano, mahatonga ny fofona fofona mety hampiasaina manodidina ny ankizy sy ny biby.
Faharoa lehibe, mamela fe-potoana 8 ora
Jiro malefaka misy loko miloko
Tsy misy lelafo mitanjaka
Fijanonana fiara ho an'ny fiarovana
Tsy misy hafanana, koa tsy misy fanapotehana ny menaka ilaina
Light jiro LED maivana
Mety tsara toy ny jiro amin'ny alina
Ny haingon-trano Aroma Humidifier dia tena menaka fofona menaka manitra Contact Now
Masinina Mini Machine Scost Aroma diffuser Contact Now
Ny varotra USB Scent diffuser amin'ny Amazon Ebay Walmart Contact Now
Fampidiran-tsolika tena ilaina amin'ny Office Home Hotels Contact Now
Fantsom-baravarana fantsom-baravarankely ho an'ny orinasan'ny fiara lehibe Contact Now
Mamatsy milentika fampielezana elektrika elektrika amin'ny Timer Contact Now
Fantsom-barotra elektrika USB ho an'ny UK Australia Canada Contact Now
Fitaovana bateria fantsim-bolo miketriketrika USB tsy matanjaka Contact Now
Masinina Mini Scent diffuser Aroma diffuser Electric Scent Machine Aroma diffuser Machine Electric Mini Scent diffuser Jasmine Scent diffuser Masinina Fitaovana menaka diffuser Wifi Scent diffuser Usb Scent diffuser